कस्ता कर्महरु गर्दा आयु बढ्छ ? [महाभारत–चिन्तन] – Chitwan Post
कस्ता कर्महरु गर्दा आयु बढ्छ ? [महाभारत–चिन्तन]
युधिष्ठिरको जिज्ञासामा भीष्मले आयुको वृद्धि र क्षय गर्ने शुभ र अशुभ कर्महरुको वर्णनद्वारा गृहस्थाश्रमका कर्तव्यहरुको विस्तारपूर्वक चर्चा गरेका छन् । सदाचारद्वारा मान्छेको आयु प्राप्त हुन्छ, सदाचारद्वारा सम्पत्तिको प्राप्ति हुन्छ र सदाचारद्वारा नै उसले यसलोकमा र परलोकमा कीर्ति पाउँछ । दुराचारी मान्छेसँग सम्पूर्ण प्राणी डराउने र उसको सबैले तिरस्कार गर्ने भएकाले उसले यस संसारमा वास्तविक आयु प्राप्त गर्न सक्तैन । नास्तिक, क्रियाहीन, गुरूको र शास्त्रको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने तथा धर्मलाई नजान्ने व्यक्तिको पनि आयु क्षीण हुन्छ ।
ऋषिहरुले प्रतिदिन सन्ध्योपासना गर्नाले नै लामो आयु प्राप्त गरेका थिए । त्यसैले प्रत्येक दिन सूर्योदय हुनुभन्दा दुई घडी पहिला ब्रह्ममुहूर्तमा उठ्ने, धर्म र अर्थका विषयमा चिन्तन गर्ने, शौच–स्नानादिबाट निवृत्त भएर बिहान र बेलुका दुवै समयमा सन्ध्या गर्नुपर्छ तर उदाउँदो, अस्ताउँदो र मध्याह्न कालका सूर्यलाई हेर्नु हुँदैन । कुनैपनि जातका पुरूषले कहिल्यै पनि परस्त्रीसँग संसर्ग गर्नुहुँदैन । परस्त्रीसेवनले मनुष्यको आयु तत्काल समाप्त हुन्छ । संसारमा परस्त्रीसमागमजस्तो पुरूषको आयु नष्ट गर्ने अर्को कुनै कार्य छैन । स्त्रीका शरीरमा जति रौँहरु छन् त्यति नै हजार वर्षसम्म व्यभिचारी पुरूष नरकमा रहनुपर्छ ।
कपाल कोर्ने, आँखामा गाजल लगाउने वा शृङ्गार गर्ने, दाँतमुख धुने र देवताको पूजा गर्ने काम दिनको पहिलो प्रहरमा नै गर्नुपर्छ । मलमूत्रतिर हेर्नु हुँदैन । ‘नातिकल्यं नातिसायं न च मध्यन्दिने स्थिते, नाज्ञातैः सह गच्छेत नैको न वृषलैः सह’ (महाभारत १३।१०४।२४–२५) अर्थात् अत्यन्त बिहानै, धेरै साँझ परिसकेपछि र ठीक मध्याह्नकालमा पनि यात्रामा निस्कनु हुँदैन । अपरिचित व्यक्ति र शूद्रसँग तथा एक्लै पनि यात्रा गर्नु हुँदैन । हिँड्दै गर्दा बाटामा पीपल, वर आदि वृक्षहरु देखिए दाहिने पारेर हिँड्नुपर्छ । ‘उपानहौ च वस्त्रं च धृतमन्यैर्न धारयेत्’ (पूर्ववत् १३।१०४।२८) अर्थात् अर्काले लगाएका कपडा र जुत्ता पनि लगाउनु हुँदैन । सदैव ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्छ । एउटा खुट्टाले अर्को खुट्टा दबाउनु हुँदैन । औँसी, पूर्णिमा, चतुर्दशी र अष्टमी तिथिका दिन आफ्नै पत्नीसँग पनि सहवास गर्नु हुँदैन । कसैको निन्दा र बदनाम गर्न तथा चुक्ली लगाउन पनि हुँदैन ।
अर्काको मर्ममाथि कहिल्यै पनि आघात गर्नु हुँदैन किनभने हतियारले काटेको रुख पनि पुनः पलाउन थाल्छ र गडेको काँडा पनि निकाल्न सकिन्छ तर दुर्वचनरुपी शस्त्रले बनाएको घाउ कहिल्यै निको हुँदैन । शिक्षाका लागि पुत्र वा शिष्यलाई हप्काउन सकिन्छ तर क्रोधमा आएर अरुलाई हप्काउनु हुँदैन । ब्राह्मणको निन्दा गर्दा र घर घर घुमेर नक्षत्र एवं तिथिका बारेमा जानकारी गराउँदा पनि आयु क्षीण हुन्छ । औँसीका दिनमा बाहेक सदैव दाँत माझ्नुपर्छ र दाँत माझ्दा मौन बस्नुपर्छ । हलुवा, खिचडी, पुरी र खीर देवतालाई चढाएर मात्र खानुपर्छ । बिहानै उठेर प्रतिदिन आमाबुबा र मान्यजनलाई प्रणाम गर्नाले आयु बढ्छ ।
एकाग्रचित्त भएर दिनमा उत्तरतर्पm फर्केर नै दिसा–पिसाब गर्नुपर्छ । दाँत नमाझीकन देवताको पूजा गर्नु हुँदैन । देवताको पूजा नगरीकन गुरू, वृद्ध, धार्मिक र विद्वान् व्यक्तिबाहेक अरुकहाँ जान हुँदैन । विवाहभन्दा अगाडि सम्भोग गर्न हुँदैन र त्यसो गर्दा ब्रह्मचर्यव्रत भङ्ग हुने भएकाले त्यस्तो व्यक्ति अपराधी मानिन्छ । ‘उदक्शिरा न स्वपेद् तथा प्रत्यक्शिरा न च, प्राक्शिरास्तु स्वपेद् विद्वानथवा दक्षिणाशिराः’ (पूर्ववत् १३।१०४।४८) अर्थात् उत्तर र पश्चिमतिर शिर गरेर सुत्नु हुँदैन । विद्वान् व्यक्तिले पूर्व अथवा दक्षिण शिर गरेर नै सुत्नुपर्छ । अर्कासँग एउटै खाट वा पलङमा सुत्नु हुँदैन ।
न नग्नः कर्हिचित्
स्नायान्न निशायां कदाचन ।
स्नात्वा च नावमृज्येत
गात्राणि सुविचक्षणः ।।
अर्थात् विद्वान् व्यक्तिले कहिल्यै पनि नाङ्गै भएर स्नान गर्न हुँदैन । रातमा समेत स्नान गर्न हुँदैन । स्नान गरेसकेपछि अङ्गहरुमा तेल आदिले मालिस गर्न पनि हुँदैन । स्नान गरिसकेपछि चिसो कपडा पहिरिनु हुँदैन । ‘उदक्यया च सम्भाषां न कुर्वीत कदाचन’ (पूर्ववत् १३।१०४।५३) अर्थात् रजस्वला भएकी स्त्रीसँग कहिल्यै पनि कुराकानी गर्नु हुँदैन ।
भोजन गर्दा पूर्व दिशातिर फर्कनुपर्छ र मौन रहेर नै भोजन गर्नुपर्छ । पस्किएको भोजनको कहिल्यै पनि निन्दा गर्नु हुँदैन । भोजन बसेर नै गर्नुपर्छ, हिँड्दै भोजन गर्न हुँदैन । पूर्व दिशातिर फर्केर भोजन गर्दा आयु बढ्छ, दक्षिण दिशातिर फर्केर खाँदा कीर्ति बढ्छ, पश्चिम दिशातिर फर्केर भोजन गर्दा धन मिल्छ र उत्तर दिशातिर फर्केर खाँदा सत्यको प्राप्ति हुन्छ :
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते
यशस्यं दक्षिणामुखः ।
धन्यं पश्चान्मुखो भुङ्क्ते
ऋतं भुङ्क्ते उदङ्मुखः ।।
खडाभएर पिसाब फेर्न हुँदैन भने खुट्टा भिजाएर सुत्न हुँदैन तर खुट्टा भिजाएर भोजन गर्ने व्यक्तिको आयु सय वर्षको हुन्छ । भोजन गरेर नचुठ्ने व्यक्तिले गाई, अग्नि र ब्राह्मणलाई छुन हुँदैन भने यस्ता जूठा व्यक्तिलाई सूर्य, चन्द्रमा र नक्षत्रको त्रिविध तेज पनि प्राप्त हुँदैन । जूठै हातले शिर छुन हुँदैन किनभने समस्त प्राणहरु मस्तिष्कमा नै आश्रित हुन्छन् ।
फाटेको आसनमा बस्न, नाङ्गै स्नान गर्न र सुत्न, शिरको कपाल पक्रेर तान्न र मस्तिष्कमा प्रहार गर्न, दुवै हात सटाएर आफ्नै शिर कन्याउन र बारम्बार शिरमा पानी राख्न पनि हुँदैन । ‘तिलसृष्टं न चाश्नीयात्’ (पूर्ववत् १३।१०४।७०) अर्थात् तिलद्वारा बनाइएका पदार्थहरु खान हुँदैन ।
उभे मूत्रपुरीषे तु
दिवा कुर्यादुदङ्मुखः ।
तथा ह्यायुर्न रिष्यते ।।
अर्थात् दिनमा दिसा–पिसाब गर्दा उत्तर दिशातिर फर्किनुपर्छ भने रातमा दक्षिण दिशातिर फर्केर दिसा–पिसाब फेर्नुपर्छ । यसो गर्नाले आयुको नाश हुँदैन । त्यसैगरी ‘गुरूनिन्दा दहत्यायुः’ (पूर्ववत् १३।१०४।८१) अर्थात् गुरूको निन्दा गर्नाले आयु डढ्छ वा नाश हुन्छ । एउटै भाँडामा पनि सँगै खान हुँदैन । हातमा नुन लिएर चाट्ता, रातमा दही र सातु खाँदा, रौँ परेको अन्न खाँदा, शत्रुको श्राद्धमा भोजन गर्दा र सुती सुती खाँदा पनि मान्छेको आयु घट्छ ।
घरमा परेवा, सुगा, मैना आदि पाल्नु मङ्गलमय मानिन्छ । सायंकालमा सुत्न, पढ्न र भोजन गर्न पनि हुँदैन । रातमा श्राद्ध गर्न, खाएर दाह्रीकपाल फाल्न, रातमा नुहाउन र कपडा धुन, रातमा बढ्ता भोजन गर्न र भोजन गरिसकेपछि दौडन पनि हुँदैन । दाह्रीकपाल काट्दा पूर्व वा उत्तर दिशातिर फर्किनुपर्छ । ‘शिरः स्नातोऽथ कुर्वीत दैवं पित्र्यमथापि च’ (पूर्ववत् १३।१०४।१२५) अर्थात् टाउको नुहाएर मात्र देवकार्य र पितृकार्य गर्नुपर्छ ।
‘न चेष्र्याः स्त्रीषु कर्तव्या रक्ष्या दाराश्च सर्वशः’ (पूर्ववत् १३।१०४।१३७) अर्थात् सबै उपायद्वारा स्त्रीको रक्षा गर्नुपर्छ र स्त्रीसँग ईष्र्याभाव राख्नु हुँदैन । ईष्र्या राख्नाले आयु क्षीण हुन्छ । सूर्योदय भएपछि दिनमा र रातको प्रारम्भिक कालमा पनि सुत्नु हुँदैन । निमन्त्रणा नगरीकन कहीँ पनि जानु हुँदैन तर यज्ञ हेर्नका लागि नबोलाए पनि जान सकिन्छ । जहाँ आफ्नो अनादर हुन्छ त्यहाँ जानाले आयुको नाश हुन्छ :
अनिमन्त्रितो न गच्छेत
यज्ञं गच्छेत दर्शकः ।
गमनं तत्र भारत ।।
एक्लै परदेश जान र रातमा यात्रा गर्न पनि निषिद्ध छ । यदि कुनै कामविशेषले घरबाहिर गए पनि साँझ पर्नुअघि नै घर आउनुपर्छ । हितकर छ कि छैन भनेर विचार नै नगरीकन आमा, बुबा र गुरूजनहरुको आज्ञा तत्काल पालन गर्नुपर्छ । ‘यत्नवान् सुखमेधते’ (पूर्ववत् १३।१०४।१४६) अर्थात् प्रयास गर्ने व्यक्ति सुखपूर्वक उन्नतिशील हुन्छ । सम्पूर्ण शास्त्रमा सदाचारलाई नै श्रेष्ठ बताइएको छ । ‘आचारप्रभवो धर्मो धर्मादायुविवर्धते’ (पूर्ववत् १३।१०४।१५५) अर्थात् सदाचारद्वारा धर्मको उत्पत्ति हुन्छ र धर्मद्वारा आयु बढ्छ । तसर्थ सदाचारयुक्त कर्महरु गरेर प्रत्येक व्यक्तिले आआफ्नो आयु बढाउनुपर्छ ।